Olee otu BoomTown si mezuo mkpọchi Martech ya na Call Intelligence | Martech Zone
Mkparịta ụka, na ịkpọ oku ekwentị, na-aga n'ihu ịbụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè maka ijikọ ndị mmadụ na ịtụgharị ha ka ha bụrụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe. Smartphones emechila ọdịiche dị n'etiti nchọgharị n'ịntanetị na ịkpọ oku - na mgbe ọ bịara n'ihe mgbagwoju anya, ịzụrụ ihe dị oke ọnụ, ndị mmadụ chọrọ ịbanye na ekwentị ma soro mmadụ kwurịta okwu. Taa, teknụzụ dị iji tinye nghọta na oku ndị a, yabụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịme otu mkpebi ahụ, mkpebi nke data gbasara oku ha na-akpọ maka ọwa dijitalụ.
At Boom, anyị etinyela ego na kpọọ nkà na ụzụ. Anyị bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ na ire ere nke na-enyere ụlọ ọrụ ụlọ ala na ụlọ imechi ọtụtụ azụmahịa. N'inye azịza anyị dị na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ise, ndị ahịa anyị agaghị eme ịzụta - ma ọ bụ kwenye demo - tupu ha abanye n'ekwentị na nkwụghachi ahịa. N’ihi ya, ekwentị anyị na-akụ mgbe niile.
Akụkụ, nke ahụ bụ ụdị azụmaahịa anyị. Ezigbo ụlọ na-amasị ikwu okwu - ha bụ ndị nwere mkparịta ụka nke ọma, na-enwe mmasị ịme azụmahịa na ekwentị. Ma ọ bụkwa ọdịdị nke azụmahịa taa: ndị mmadụ na-achọ, na-eme nchọgharị ma na-akpọ site na ekwentị ha ka ha na-agagharị n'okporo ụzọ ịzụta. Ọ dị mkpa na otu ndị ahịa anyị nwere nghọta iji soro, nyochaa ma bulie maka oku ndị a na-abata, yana ndị otu ahịa anyị kwadebere ịza oku nke nwere ike ịtụgharị.
Anyị tinyere ego na Invoca's Voice Marketing .gwé ojii ịgbakwunye oyi akwa nke nghọta gburugburu ọwa anyị ahịa otu eji ọtụtụ. Ihe omuma ndi ozo a na enyere anyi aka ka ndi ahia na ndi ahia anyi na aru oru karie oru - ndi n’agha anyi nwere ike were oku ozo ma nweta uru karie nke obula, ndi otu ahia anyi nwere ike ikwu na ndi anyi na achoputa ihe n’ekwe nti.
Naanị site na ịgbanwuo Invoca, anyị na-ebelata ọnụahịa anyị kwa ụzọ (CPL) na ọkara. Nke a bụ n'ihi na anyị nwere ike ikwu na ekwentị anyị niile na-eduga na mkpọsa dijitalụ dị iche iche atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa na-emekọrịta tupu ha akpọ anyị. Anyị amụtala na ọ dịghị onye na-akpọ ma na-akọwa nkọwa nke otu ha si anụ maka anyị - anyị nwere ike ịhụ na ha chọrọ okwu, pịa na njikọ, mee nyocha, gwa ndị enyi ole na ole gbasara nhọrọ, ma kpọọ ekwentị. . Maka ụzọ mgbagwoju anya a iji zụta, ha nwere ike ịgwa ndị na-ere ahịa anyị, ha nụrụ “okwu ọnụ” banyere anyị.
Ekwenyere m na ọgụgụ isi bụ ihe dị mkpa maka azụmaahịa taa, ma enwere ụfọdụ ihe m mụtara nke nwere ike inyere ndị ahịa ndị ọzọ aka ịmalite na teknụzụ ahịa ọhụụ ọhụụ.
Ibido site na ọgụgụ isi
Enwere ihe ole na ole ị ga-achọ mgbe ị na-enyocha ndị na-enye ọgụgụ isi oku. Nke mbụ bụ ntinye nọmba. Ntinye nọmba dị omimi na-enye gị ohere iji dochie nọmba ekwentị ụlọ ọrụ na - ere ahịa - peeji nke ọdịda, eBook ma ọ bụ peeji ọnụahịa nke weebụsaịtị, dịka ọmụmaatụ - jiri nọmba pụrụ iche nke na - agbakwunye na isi iyi nke oku ọ bụla. Nke ahụ pụtara na ị ga - ahụ data granular dị ka isiokwu onye na - akpọ oku na - achọgharị, mgbasa ozi ha pịrị, na peeji nke weebụsaịtị gị ha na - agagharị tupu ha atụtụ ekwentị.
Iji Invoca, onye na-ere ahịa nwere ike ịhụ ozi a niile oge ekwentị kpọrọ oku. Ha nwekwara isi ihe data ozo bara uru, dika ego onye na-acho, ihe omuma ahia na ihe ndi mmadu, nke na enye ha ihe osise nke onye no na uzo ozo. Ana m akwado iji ozi a mee ka onye na-anọchite anya ya nwee ike ịgafe onye nnọchi anya kwesịrị ekwesị na ezigbo oge - ndị ahịa dị ugbu a ma ọ bụ atụmanya VIP na ahịa ahịa gị kachasị mma, dịka ọmụmaatụ.
Ọ dị mkpa iji ikpo okwu jikọtara nke ọma na nchịkọta teknụzụ gị na teknụzụ ahịa gị. Anyị na-eji Invoca's Mmekọrịta Facebook maka ịghọta ịdị irè nke mgbasa ozi mgbasa ozi anyị; nke a na-eme ka anyị mara onye nke ndị na-akpọ anyị nwere mmetụta na mgbasa ozi na Facebook tinyere njem ha. Nke a bara uru ugbu a na anyị nwere mgbasa ozi pịa-ịkpọ oku ozugbo na Facebook Brand Page na na mgbasa ozi Facebook anyị.
Ntughari nke Salesforce na-enye anyị ohere ịbanye na data ndị ahịa anyị ma wuo profaịlụ ndu maka onye ọ bụla na-akpọ. Ndị nnọchiteanya anyị nwere ike ịhụ ebe oku si, onye nọ na akara yana mmekọrịta ọ bụla gara aga ha na ụlọ ọrụ anyị nwere. Nke a na-ewepu ọtụtụ n'ime kwụsị ma bido akụkụ nke oku mbụ; ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike ikwenye nkọwa ha nwere.
Mbido dị mkpụmkpụ na-eme ka atụmanya nwee obi ụtọ ma gosipụta na anyị ji oge ha kpọrọ ihe. Nke a ewepụtakwara oge maka ndị na - echegharị anyị - ndị ahịa anyị na - ewe ihe dịka oku 1,500 kwa ọnwa, teknụzụ a belatara oge a na - akpọ oku site na ihe ruru nkeji 1.5 ruo 2.5 ọ bụla Nke a nwere onwe ya awa kwa ọnwa ndị na-emegharị emegharị nwere ike iwepụtakwu azụmaahịa.
Chọrọ ikpo okwu na-enye gị ohere iji nyochaa ọdịnaya nke mkparịta ụka nke na-eme na ekwentị iji metụta mkpọsa nzụlite n'ọdịnihu - ma ọ bụ ụfọdụ, jiri ọdịnaya ahụ ka ị wee emela na-azụlite ndị ahịa zụrụla ekwentị. Nke a nwere ike ịnụ ụda nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị na-atụ anya na ụlọ ọrụ ga-eweta ọrụ ahaziri na ntanetị.
Tọ Onwe Gị Maka Ihe Successga nke Ọma
Anyị nwere ike ịhụ ebe oku anyị na-abịa, onye nọ na akara yana gburugburu akpọ oku ahụ. Iji mee usoro dị ka ọrụ a, m ga-akwado ịme usoro ụfọdụ iji nweta nghọta karịa na oku mbata:
Na-akwado nọmba ekwentị site na ibe ụlọ gị, ibe ọnụahịa na ọwa ahịa ọ bụla ị nwere - mmekọrịta mmadụ na ibe, ọchụchọ, akwụkwọ ọcha, webinars, mmemme ụlọ ọrụ, ọbụlagodi pọdkastị. Mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịkpọ gị.
Tinye ego na mgbasa ozi pịa iji kpọọ na mgbasa ozi gị na mgbasa ozi ọchụchọ, yabụ ndị mmadụ na-achọ ma ọ bụ na-eme nchọgharị na ekwentị mkpanaaka nwere ike ịpị bọtịnụ ma kpọọ gị ozugbo.
Jiri nọmba ekwentị dị ike maka akụ ọ bụla, n'ụzọ ahụ ị ga - ahụ ebe oku na - abịa. Ọ dị mkpa iji melite ahịa ROI.
Bido chee echiche banyere oku dịka ị ga - eche na akụ dijitalụ gị - ma chọọ otu ọkwa dị na ihe na - arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ.
Anyị mụtara ọtụtụ ihe n'ụzọ ma chọpụta na ụfọdụ echiche anyị ezighi ezi. Na mbu, anyị tụrụ anya ịkpọ ọgụgụ isi iji mee ka ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ anyị. Nke a abụghị - mana inwekwu nghọta banyere ndị na-akpọ anyị na mkpọsa nke metụtara omume ha bịara bụrụ ihe bara uru karị. Anyị emejupụtala ọdịiche dị mkpa na nchịkọta teknụzụ ahịa anyị, nke kachasị maka oku bara uru nke na-eduga n'ịgbanwekwu mgbanwe, ma mepụta ahụmịhe kachasị mma maka ndị họọrọ ịkpọ anyị.
Tags: kpọọ ọgụgụ isioku na-esochikpọọ nyocha teknụzụụgwọ kwa ndufacebook oku nsusooku facebookinvoca
Osimiri bụ Director nke Marketing maka Boom, ikpo okwu ulo ahia nke di na Charleston, SC. Osimiri nwere ihe karịrị afọ 9 na ntanetị na mgbasa ozi n'ịntanetị, na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ 500 Fortune gafee e-azụmahịa, njem na ụlọ ala.
TubeMogul: Digital Video Ad Planning na yingzụchafee Channels